Hiriyoonni koo mana hidhaatti hafuun gammachuu koo na jalaa hir'ise - Lalisee Baahiruu - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Lalisee
Lalisee Baahiruu dubartoota shan mootummaan federaalaa himata isaanii adda kutee gadhiise keessa ishee tokko.
Waxabajjii 08 bara 2008 A.L.I magaalaa Finfinnee naannoo mana jireenya ishee shagolee jedhamuun beekamu irraa namootni isheen eenyummaa isaanii hin beekne sadii dirqiin konkolaataa keessa galchanii gara 'Maa'ikalaawii' akka geessan dubbatti.
"Na dhukkubee waan tureef mana yaalaa deemee yeroon manatti deebi'u, dhufanii mana kootti marsan, sanaan duras dhufanii waan turaniif ijoollee koo fuulduratti akka nan qabneef jedheen manaa bahe, achii boodaa konkolaataan na hordofanii, boodarras namoonni sadi bu'anii na qabanii humnaan konkolaataa na seensisan," jechuun haala itti qabamte yaadatti.
Guyya qabamte sana ija hidhanii magaalaa keessa erga naannessaa turanii booda, galgala 'Maa'ikalaawii' akka geessaniifi guyyoota sadiif maatii waliin osoo wal hin qunnamiin dhoksanii akka tursiisan dubbatti.
'Maa'ikalaawii' keessa baatilee afuriif turuu kan dubbattu Laliseen, "turtiin maa'ikalaawii baay'ee ulfaataa ture," jetti.
"Nama Dirribsaa jedhamu waliin hojii gurguddaa hojjetaa turte, ijoolleedhaaf maallaqa kennaa turte jedhanii, humnaan na amansiisuuf reebichaa fi doorsisa garagaraa narraan gahaa turan."
Boodarras maallaqni karaa ishee dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo irraa dhufaafii akka ture nama Dirribsaa jedhamu irratti ragaa bahi naan jedhan kan jettu Laliseen, si'a lama sadii na gaafatanii gaafan didu na reebuu eegalan jetti.
"Tokko gara tokkoon gaafa na kabalu tokko gar-tokkotti na deebisa, sarartuu quba kiyya gidduu galchanii walitti cafaquu akkasumas qalamaan ija na waraanuufillee hedduu yaalan," jetti.
Waan isheen hin beekne waraqaa irratti barreessanii humnaan akka mallatteessituufis reebamuushee dubbatti.
Dararaan achitti dubartootarra gahu haga kan dhiirota hamaa ta'uu baatullee dhiitamuu, kabalamuu, dugdarra nama deemuu, reebicha, ispoortii hojjechiisuu hanga qullaa dhaabuutti dubartoota hidhaman irra dararaan akka gahu himtee jirti.
Turtii maa'ikalaawii baatii afurii booda gara mana hidhaa Qaallittii geeffamne kan jettu Laliseen, achittis reebichi jiraachuu baatullee hidhamtoonni siyaasaa mirga hidhamaan biraa qabu hin qabnu turre jetti.
Ishee dabalatee namoota biroo sadii "ragaan nurratti dhiyaateefi jechi kennine waan hin jirreef sagalee 'yeroo isin haasoftan waraabame' jedhame Teelee irraa dhufeen," gocha shororkeessummaan himatamuu dubbatti.
"Akka murtoo hin arganneef beellama dheeraan nu sukkuumaa turan, ta'e jedhaniima namni akka of jibbuufi of nuffu garaa garummaa ji'a sadii hanga ji'a shaniitti nu beellamu ture," jetti.
Gonkuma nan baha jedhee yaadee hin beeku kan jettu Laliseen, ragaan waan narratti hin dhiyaanneef yoo xiqqaate waggaa afurii hanga shanii natti murtaa'a jedheen eegaa ture jetti.
Wayita mootummaan hidhamtootaa nan gadhiisa jechuu miidiyaa irraa dhagaa'an hidhamaan hundi gammachuun faarfataafi sirbaa ture jetti.
Haa ta'u malee "takka ture wanti haasa'amuu eegale abdii nu kutachiise," jetti.
Dubartootni sababa siyaasaan hidhamanii mana murtiitti dhimmi isaanii ilaalamaa ture nama 13 yoo ta'an, isaan keessaa kan gadhiifame nama shan qofa kan jettu Laliseen, hiriyoonni ishee achitti hafuun isaanii gammachuu ishee akka jalaa hir'ise dubbatti.
"Akkaataan uummati itti nu simate hedduu nu gammachiise, utuu silaa hidhamaa siyaasaa hundatu bahe ta'ee kana caalaa na gammachiisa ture."
Gadhiifamuu keenyatti kan galateeffamuu qabu uummata Oromoo dhiibbaa godhee kana nu agarsiisedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas tattaaffii godheef galata qaba jetti.
Lakkoofsa hidhamtoota mana hidhaa jiraniin yoo madaalamu namni gadhiifame baay'ee muraasa, kanaaf miidiyaa dabalatee namni hunduu namoota mana hidhaatti hafan bira dhaabachuu qabu jechuunis dhaamti.
Madda suuraa, GS
Dubartummaafi haadha ijoollee ta'uun yoo arrabaaf nama saaxilu
Aadde Nabbabuu Dassaalagn haadha ijoollee shamarran sadiiti. Amajjii 9, 2009 A.L.I osoo daandiirra deemaa jirtuu ture namoonni nageenyaa itti dhiyaatanii gaaffiif akka ishee barbaadan yoo itti himan waan shakkiteef lakki jette.
Haalli ishee kan itti hin tolle namoonni nageenyaas qabanii konkolaataa keessatti ishee darbani. Teessumni konkolaataas ishee dhahee garaachasheerratti miidhaa qaqqabsiisuu dubbatti.
Dugdashees akka dhukkubuun kan himtu aadde Nabbabuun, Maakalaawii erga seentee yaala akka argattuuf gaafattus ji'oota lamaaf namni garagalee na ilaale hin turre BBC'tti dubbatti.
Namoota bilbila ishee irra jiran akka himtu gaafachuun qorannoon akka jalqabellee ni yaadatti, maatiinshees mana hidhaa jiraachuushee kan baran yeroo manni ishee sakatta'ametti akka tureefi sanaan dura baddeetti jedhanii barbaacharra akka turan jetti.
Maakalaawiitti dararaan cimaa akka ta'e eeruun dubartii ta'uusheefi haadha ijoollee ta'uusheetti arrabsoon irra ga'aa akka tures yaadannooshee yeroo dhihooti.
Adeemsi qorannoo isaanii akka isaan fedhanitti kan geggeeffamu yoo ta'u, ijoolleenkee daandiitti ba'u, hojii saalqunnamtii irratti bobba'u, isaaniin teessifnee waan hojjatte hunda itti himna, asumatti tortortee hafta kan jedhufii sodaachisni kan biroos narra ga'aa ture jetti.
Rakkoon xiinsammuu Maakalaawiitti irra ga'uu kan himtu aadde Nabbabuun, erga baatee boodallee hojii argachuf rakkoo akka itti ta'efi akka kan biyyoota biroo beenyaan jiraachuu dhabuunsaa jireenya isheerratti dararaa akka itti uume dubbatti.
Maatiin koo na gaafaachuuf gaafa dhufan, yookaan nyaata harkaa fuudhanii yookaan ammoo balbalarraa deebisanii gidirsaa turani, kunis rakkoo xiinsammuu dhuunfaafi hawaasummaa namarraan ga'a jetti.
'Daa'ima godhachuun akkasiin na miidha jedhee hin yaadne ture'